दु:खद खबर : आजपनि बसको ठक्करबाट मोटरसाइकलमा सवार एक जनाको मृ’त्यु ! – PathivaraOnline
Home > समाचार > दु:खद खबर : आजपनि बसको ठक्करबाट मोटरसाइकलमा सवार एक जनाको मृ’त्यु !
दु:खद खबर : आजपनि बसको ठक्करबाट मोटरसाइकलमा सवार एक जनाको मृ’त्यु !
पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत झिलझिलेमा आज भएको सवारी दुर्घटनामा परी सुनसरी बराह क्षेत्र –७ का २९ वर्षीय ज्ञानेन्द्र तामाङको मृत्यु भएको छ । पश्चिमबाट पूर्वतर्फ जाँदै गरेको को १ ख ६०९८ नम्बरको बसले प्रदेश १—०२—०४३प ९२१८ नम्बरको मोटरसाइकलमा सवार तामाङलाई ठक्कर दिँदा उनी गम्भीर घाइते भएका थिए ।
उनीसँगै मोटरसाइकलमा सवार इटहरी उपमहानगरपालिका–१ की सलिना राई घाइते भएकी छन् । उनीहरु दुवैलाई बिर्तामोडस्थित बिएण्डसी अस्पतालमा उपचारका लागि लगिएकामा उपचारकै क्रममा तामाङको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ ।
यस्तैगरी आज करेन्ट लागेर घाइते भएका एकजनाको जिउँदै उद्धार गरिएको छ । भक्तपुर नगरपालिका–१ सल्लाघारी व्यासी सडक खण्डअन्तर्गत इतापाकेमा सडकवत्ती जडान गर्न खम्बामा चढेका मजदुरलाई करेन्ट लागि बेहोस भएको अवस्थामा उद्धार गरिँएको हो ।
Breaking>>> विश्वको सर्वाधिक वायु प्रदूषण भएको शहर, वातावरण विभागको यस्तो अनुरोध !
आज शनिबार राजधानीका यी २२ ठाउँका मुख्य सडकमा सवारीसाधन चलाउन नपाईने !
नेपाल टेलिकमको फेसबुक पेजमा यस्तो भएपछि सबै परे चकित